राजनैतिक दलले पचाउनै नसकेको बालेनको जित
बुधबार, जेठ १८, २०७९
रामु ओली : स्थानीय तह निर्वाचन अघि, पछि र अहिलेसम्म नै एउटै नाम चर्चामा ‘बालेन’ । मैले पूरा नाम लेखिन, उसको पृष्ठभुमि लेखिन किनकी त्यो सन्दर्भ होईन ।
बालेन मेरो पुस्ताले देखेको एउटा त्यस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवार हो, जसले देशको राजधानी काठमाडौं महानगरमा भारी मतान्तरले देशकै दुई स्थापित राजनैतिक दललाई मात्रै हराएन सत्ता साझेदार दलहरुको गठबन्धनलाई समेत हराउन सफल उम्मेदवार हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन पछि माओवादी केन्द्र, जसपा र कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता २०७४ भन्दा राम्रो सिट जित हात पारेकोमा खुसी छन्, चिया र कफि पसलमा सोही आधारका गफमा छाती चौडा पारेका छन् । उता एमाले नेता कार्यकर्ता के मनेमा छाती फुल्याउदै छन् भने हामिले सत्ता साझेदार दलहरुको महागठबन्धनलाई हराएर …यति सिट जित्न सफल भयौं, साथै प्रतिशतमा हाम्रो मत बढ्न सफल रह्यो भन्ने आकडा पेश गरेको देखिन्छ ।
यहाँ सम्म सबै ठिक छ, आकडा पनि सहि छ । तर जब बालेनको चर्चा सुरु तब एउटा स्वतन्त्र नागरिक बाहेकका ब्यक्तिहरु बालेनको जित, बालेनको चर्चामा कत्तिपनी खुसी भएको देख्न सकिन्न ।
लाग्छ बालेनले मत पाएकै होईन, बालेनले पाएको जनाधार, जनाधार नै होईन । जनाधार त केवल एमाले, कांग्रेस र माओवादीले पाए मात्रै मानिन्छ । बालेनले पाएको त मत होईन त्यो त एउटा खोस्टो मात्रै हो ।
एमालेले महागठबन्धन संग जित निकाल्यो त्यो सहि, गठबन्धनले पुरानो पर्फमेन्सलाई सुधारेर धेरै सिट जित्यो त्यो पनि सहि अनि बालेनले एमाले र महागठबन्धनलाई हराएर काठमाडौंमा जित निकाले त्यो चाहिँ कसरी गलत र पचाउन नसकिएको कुरा बन्यो , यहि बुझ्न सकेन ।
बालेन एक्लोले के गर्न सक्छ ? कार्यपालिका बैठक लाइभ गरेर मात्रै के हुन्छ ? अनुभव छैन, खारिएका काठमाडौंका वडा अध्यक्षको अगाडी बालेनको केही गल्दैन । अब भन्ने र भनेका कुरा यहि नै त हुन् ?
मानौ बालेनले केही माखो मार्न सकेनन् , एउटा सिन्को भाच्न सकेनन् र पनि उ ५ बर्षको लागी काठमाडौं महानगरको मेयर हो । जसरी एमाले, कांग्रेस, माओवादीका जनप्रतिनिधिलाई जनताले चुनेका हुन् त्यसरी नै बालेनलाई पनि राजधानीका जनताले चुनेका हुन् ।
बालेनले केही माखो मार्न सकेनन् , एउटा सिन्को भाच्न सकेनन् भने त्यसबेला बालेन उहीँ राजनैतिक दल भएको स्थानमा जनताको नजरमा उभिनेछन ।
अझै यसलाई यसरी बुझौं, देशमा नोटा (NOTA) को माग नगरेको होइन, कुनैपनि दल वा उम्मेदवार मन नपरेको अवस्थामा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारलाई रोज्दिन भनेर रोज्न पाउने नोटाको ब्यवस्था राज्यको निर्वाचन प्रणालिले ब्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा नोटा नै सम्झेर स्वतन्त्र चिन्हमा काठमाडौंबासीले मत हाले । जनताको रोजाइमा बालेन परेनन् गरे त्यो मैले माने तर जनताको नजरमा राजनैतिक दल मन नपरेको, हामी भोट गर्दैनौ भनेर अर्कै चुनाव चिन्ह छानेको राजनैतिक दल वा दलका नेता कार्यकर्ताले स्वीकार गर्ने कि बालेनको खेदो खन्न केही मिनेट, केही घण्टा वा सामाजिक संजालमा लेखेर समय खेर फाल्ने ?
एक पटक सम्झनुस त नोटाको ब्यवस्था भैदिएको भए, बालेको लौरोमा होइन नोटामा ३५-४० प्रतिशत मत खसेको भए निर्वाचन र त्यसबाट निस्केको नतिजा कस्तो हुन्थ्यो होला ।
खुसी हामी सबै हुनैपर्छ कमसेकम जनताको मत नोटामा होईन, एउटा केही गर्छु भन्ने जोशले भरिएको, योजना सहितको युवाको हातमा पुगेको छ जनताको मत ।
आशा गर्नुहोस् बालेनले केही गरोस, केही नगरे बल्ल भन्नुहोस्- हामी राजनैतिक दल जस्तै रैछ बालेन, बोल्ने मात्रै, आशा बाड्ने मात्रै ।
यहाँ कतिले भने बालेन राजाबाट परिचालित छ, कतिले भने इयुबाट परिचालित छ, कतिले भने माओवादी थियो रे बालेन । इयुले, राजाले, भारतले लगानी गरेको कुरा सत्य नै हो भने सबैभन्दा पहिला त्यो ट्याग राप्रपा, एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपालाई बर्षौ देखी लाग्दै आएको छ पहिला त्यो स्वीकार गर्नु पर्छ ।
बरु म यो मान्छु, बालेनले चुनावको सहि योजना बनाए । बालेन वा बालेनको टिमले योजनाबद्ध रुलमा के बोल्ने, के लेख्ने, के लाउने, जनता हुने कसरी पुग्ने, मतदातालाई कसरी प्रभावमा पार्ने, माध्यम कुन प्रयोग गर्ने यी सबैको योजना बनाए । उनिहरुले युवा पुस्तालाई कसरी इन्फ्ल्युइन्समा पार्ने?, के ले पार्ने ? कसरी युवालाई आकर्षित गर्ने ? युवापुस्ता कहाँ छन् ? यी सबैको अध्ययन गरेकै हुन् ।
सामाजिक संजाललाई खास अर्थमा प्रयोग गरेकै हुन्, त्यसैको प्रभावले बिदेशमा रहेका काठमाडौंबासीका छोराछोरीलाई प्रभावमा पारेर उनका आमाबुबाको भोट हत्याउन सफल भएकै हुन् । यसमा कुनै दुई मत नै छैन ।
बालेनले चुनावमा राजनैतिक टिकाटिप्पणी गरेनन्, आफ्नो योजना सुनाए अनि भोट मागे, अरुले आफुप्रती गरेको नकारात्मक टिप्पणीलाई भजाउन सफल भए यो एउटा चुनावी रणनीति नै हो । जसमा उनी र उनको टिम सफल भएको हो ।
भारत लगायत पश्चिमा देशमा चुनावी क्याम्पिएनको नविनतम प्रयोगको अभ्यास छ, जसलाई बालेनले नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग गरे । र सफल पनि भए ।
त्यसको उदाहरणको रुपमा भारतमा प्रशान्त किशोरको Indian Political Action Committee (I-PAC) नामक चुनावी क्याम्पिएन सम्बन्धी एजेन्सी रहेको छ । जसले चुनाव प्रचार र त्यसको रणनीति तयार गर्ने काम गर्छ । जसको भारतमा ९९ प्रतिशत सक्सेस रेट रहेको छ ।
त्यही काम बालेनले अपनाए भनेर भन्दा फरक पर्दैन । राजनैतिक दलले समेत त्यता तिर ध्यान दिदा राम्रो होला एकोहोरो बालेरको खेदो खन्नु भन्दा ।
आज असार १५ : बाँकेमा मनाइदै धान दिवस
हनि ट्रयापको आरोपमा पक्राउ परेकी भावनालाई थुनामा राख्न आदेश